Products & Capacities Glass Bottles (700 ml, 680 ml, 650 ml, 350 ml, 24 ounces) 7,500,000 bots/yr., Sodium Silicate 2,400 TPY. Contact Number 056-21275
Products & CapacitiesSaw Gin 19.6 TPD, Linter 8.67 TPD, Cotton Oil 9.8 TPD. Cotton: 1,530,000 viss/yr, Linter: 158,100 viss/yr, Cotton Seed Oil: 158,238 viss/yr.Contact Number066-60109 , 066-60039
Products & Capacities Wires-56items (1core x 1.55mm² to 4core x 185mm²), Copper Rods (1.38mm),Telephone Cable, Total (58) Items. 15 million meters (or)360 MT/yr. Contact Number 01-685104 လျှပ်စစ်မီးကြိုးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ(လှိုင်သာယာ)စဉ်စက်ရုံ/အရောင်းကိုယ်စားလှယ်လုပ်ငန်းအမည်ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာ၁လျှပ်စစ်မီးကြိုးထုတ်လုပ်ရေးစက်ရုံ(လှိုင်သာယာ)Sigma Wire & Cable Factory 01-68510409-857343309-79570699409-73092517 အမှတ်(၄၇-၄၈-၄၉)၊ ဗန်းမော်အတွင်းဝန်လမ်း၊ စက်မှုဇုံ(၃)၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။၂ဦးဝင်းကြည်Royal Electric09-500496701-248256အမှတ်(၁၃၈)၊ (၂၈)လမ်း၊ အလယ်ဘလောက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။၃ဦးမောင်မောင်တင်အေးလျှပ်စစ်09-860674701-249899အမှတ်(၁၇၁-စီ)၊ လမ်း(၃၀)၊ အလယ်ဘလောက်၊ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။၄ဦးရာဇာPro-109-964010009-964011001-644090အမှတ်(၇၆)၊ လမ်းသစ်လမ်း၊ အာလိန်ငါးဆင့် အနီး၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ […]
Products and Capacities Shwe Phe Oo Tea Mix ( Army Personnel ) sachets 40 million/year. Shwe Phe Oo Tea Mix ( Commercial ) sachets 20 million/year. ( Each bag contains 30 sachets of 20 g pack ) Contact Number 01-635625 , 635253
InstallationYuan Rox Machinery Co., Ltd (TAIWAN).EstablishedIn 29.9.2005.Commercial Runningon 6.6.2006.Main PlantsCan Body Production Line, Can Ends Production Line.Products & CapacitiesCondensed Milk (SCM) Cans: 450 Cans/min (or) Meat Cans: 300 Cans/min.Contact Number01-635625 , 635253 MOON တံဆိပ်နို့ဆီရောင်းဈေးနှုန်းMOON နို့ဆီ (ရိုးရိုးအဖုံး) (၁)ဘူး = ၅၅၀ ကျပ်MOON နို့ဆီ (ရိုးရိုးအဖုံး) […]
Products & Capacities 20 Litre Purified Water 450 bot/hr, 1 Litre Purified Water 7,500 bot/hr 0.35/0.52 Litre Purified Water 6,000 bot/hr, Total 60,000 gal/day. Contact Number 032-30023 , 067-25214
Products & CapacitiesDagon Lager Beer (640 ml bot., 330 ml can, 20 Lkeg), Dagon Extra Strong (640 ml bot., 330ml can, 30 Lkeg), Dagon Super (640ml bot., 20Lkeg, 30Lkeg), Dagon Rum (3 years and7years Aging) (700 ml and 350 ml bots.), Dagon Malta Fresh Energy CSD (330ml can). Dagon Fresh Soda (330ml can). […]
Capacity 46% Ethyl Alcohol (Rum) 600 bots/hr, 17,200 bots/day, 6,307,200 bots/yr, produced from 96% Aging Ethanol.
Products & Capacities Plantation White Sugar 18,000 TPY, Molasses: 8,000 TPY. Contact Number 063-23749 , 49-150866 သကြားစက်ရုံ(ဒုရင်္ဂဗိုလ်)မှထုတ်လုပ်သော သကြားထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးများအချိုရည်ပါဝင်မှုPal%99.60%(min)ရေငွေ့ပါဝင်မှုMoisture%0.07%(max)ပြာဓာတ်ပါဝင်မှုMoisture%0.10%(max)ဓာတ်လျော့သကြားပါဝင်မှုReducing Sugar%0.10%(max)အရောင်Colour(ICU)150(max)ဆာလဖာဒိုင်အောက်ဆိုဒ်SO2(PPM)30(max)သကြားပွှုင့်အရွယ်Grain Size%40(max) အာမခံချက်များသကြားထုတ်ကုန်များအား ကျွမ်းကျင်သော ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်မှုအရ သကြားရောင်(ICU) ရရှိမှုခိုင်မာသဖြင့် အာမခံချက်ရှိပါသည်။ သကြားထုတ်လုပ်မှုနည်းစဉ်တွင် ထုံး၊ ကန့်၊ ဖော့စဖော့ရစ်အက်စစ်၊ ကူရီဖလော့၊ ဘရင်းကစ်များ အသုံးပြုပြီး စားသုံးသူများအတွက် စားသုံးရန်သင့်လျော်ပြီး ကျန်းမာရေးအတွက် အန္တရာယ်မရှိကြောင်း အာမခံပါသည်။ထုတ်ပိုးမှုစနစ်သကြားထုတ်ကုန်အလေးချိန်(၃၀)ပိသာ (၁၁၀)ပေါင်အား အတွင်းအိတ် (၄၀”x ၂၆”) (Polye Thylene) အပြင်အိတ် (36″x 24″) (Polye Woven) အတွင်းအိတ်နှင့် အပြင်အိတ်အား ချုပ်စက်သုံးစွဲလျက် ထုပ်ပိုးပါသည်။၀ယ်ယူရရှိနိုင်သောဌာနမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း(ရုံးချုပ်)